Ịkụzi Ihe Kwesịrị Ekwesị n'ime Ngwá Ọrụ Ahịa nke Ụlọ Ọrụ gị | Ọ BỤ
Ngwá Ọzụzụ Kwesịrị Ekwesị n'ime Usoro Ngwá Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ Gị
Were gander na ihe ọ bụla azụmahịa n'oge a, na ị ga-ahụ ihe ngosi nke mgbanwe na-agbanwe agbanwe dijitalụ. Kpọọ ya ụdị ihe kpatara ya ebe ọ bụ na ọtụtụ òtù n'oge a mara na ọ bụ ihe dị mkpa iji jikọọ dijitalụ usoro n'ime kwa ụbọchị.
Dị ka onye ọsụ ụzọ na teknụzụ na-akwadebe ohere, ọ dị anyị mkpa ịkwado ihe mgbu nke ọganihu ahụ na-akpali ndị ahịa anyị. Nke a bụ ihe mere anyị ji na-atụgharị uche mgbe nile iji mee ka ọ dịkwuo mfe ma dị mfe iri. Otu uzo bu ihe ndi ozo na-acho onodu: Digital Learning. Nke a dị oké mkpa na mgbakwasị na anyị anaghị enye nnukwu ihe dị iche iche iji lee ihe yiri nke a ugbu a n'ahịa. Kama nke ahụ, anyị na-anwa ịmepụta njikọta na ihe na mpaghara mpaghara ebe anyị na-ahụ otu oghere na ahịa. Nke a na-ekwe ka òtù dị iche iche nwee nhọrọ nke ịkwadebe ihe ọ bụla n'ime njem ọ bụla na-eme ka ị bụrụ ezigbo ihe maka otu na otu ọnọdụ.
N'ikpeazụ, Digital Learning bụ maka ịnye ihe kachasị mma iji nyere òtù dị iche iche aka ịnara ndị ọrụ ha site n'okike. Anyi choro ka anyi muta ihe kama ichota ndi otu ma ghara iji ya. Iji gbaa ume mmụta, anyị na-eme pilot mgbe nile ma na-ege ntị n'ịkatọ iji nweta nkwalite mmụta ihe ọmụma.
Iji mezuo ebumnuche anyị nke ịme ihe kachasị mma, anyị na-etinye ego dị ukwuu n'iji ọrụ ndị na-enye ntụziaka na-arụ ọrụ n'emepụta ihe na-eme ka ọ ghara ịbanye n'ime ọgbọ ọgbọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ihe nkedo olu nwere ike inyere gị aka iwere ihe ọbụla n'otu oge, anyị amụta site na nnyocha na onye ahịa na-ezute na ndị ahịa anyị na-achọ ihe karịrị ozi dị mkpa gbasara isiokwu. Nke ahụ bụ ihe mere anyị ji etinye oge dị otú ahụ n'oge tupu e kee ya.
N'ịghọta na onye na-amụ ihe dị nso na ndụ ụlọ, mmetụta, mkpali, ma ọ bụ ọbụna ọrụ ọrụ kwa ụbọchị nwere ike itinye òkè n'ime ego ha na-ejide, ọ na-ahụ ebube dị na ikwe ka onye ọ bụla nwee ohere ịkwadebe mgbe ha dị njikere iri ihe data dị ugbu a. "Na ohere ị ga-amụta obere oge n'otu oge ma sonye na mmụta gị n'ime ndụ ọrụ gị (ma ọ bụ nyochaa!), Mmụta ahụ ga - abụ akụkụ nke ahụmahụ gị na ụzọ ọzọ dị gburugburu. Ị maara ihe mere ị na-eji amụta ihe ị na-amụta, ị ga-enwekwa ike ịnweta ihe ọ bụla ị maara.
Ezigbo nkuzi na nlekọta ọkachamara bụ ihe onye ọ bụla na-elekọta na ndị na-enweghị isi na-achọsi ike. Ịnọgide na-ehi ụra agaghị enyere gị aka ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị. Ugbu a, anyị na-eji usoro ntanetị emepụta ihe dị iche iche na Microsoft na Ngwa Development, Otú ọ dị, anyị nwere agbakwunyere isiokwu ndị ọzọ dị na ntuziaka na ókèala dị iche iche dị ka ígwé ojii na ịdị na nzuzo nke cybersecurity.
Kedu ihe bụ Ntugharị? - Definition of Routing | IZIRỊTA